Ubuninzi boNxibelelwano lweDavidi luxhomekeke kwi-SEO?
Ngaba wakha wazibuza ukuba i-SEO ichaphazela njani iziteshi zokuthengisa zedijithali? Awufumani impendulo ecacileyo okwamanje? Akukho maxhala. Namhlanje, siya kukuchazela ngokucacileyo ukuba ubuninzi bentengiso buxhomekeke kwi-injini yokukhangela injini.
Njengoko usenokwazi, i-SEO ishintshile kakhulu kwiminyaka embalwa edlulayo. Yashintsha kwaye yahamba kakhulu ngaphezu kweendlela ezingabonakaliyo kunye nezokudala zokufakelwa kwegama elingundoqo elidume kakhulu phakathi kwee-1990. Ngo-2005, amashishini amancinci kunye nokuqalisa kwaqala ukuqesha ii-export export SEO ezithembisa ukuba ziya kunceda ukwandisa izithuthi kunye nokuthengisa - βασιλικος πολτος και εγκυμοσυνη.
Akunakuphika ukuba ngo-2017 i-SEO isaqhubeka indima ebalulekileyo ekukhuthazeni amashishini e-intanethi. Isicwangciso socwangciso lwe-injini yokukhangela sisenza iziphumo eziphezulu xa ziphunyezwe ngokuchanekileyo. Ngoko, masijonge ngokuya kwesi sihloko kwaye sibone ukuba kuthengiswa kangakanani ukuthengiswa kwedekethi kwi-SEO.
I-Basic SEO Ukubambisana kwiiWebhu zokuThengisa iiWebhu
Ezi ntsuku, ininzi yabathengisi be-intanethi kunye nabaqulunqi bewebhu baquka amaqhinga e-SEO ephambili kwindlela. Oku kwenzeka kuba namhlanje i-SEO ndlela iphelele kwaye ihlanganiswe kunanini ngaphambili. Isebenzisana ngempumelelo kunye nezinye izikhokelo zokuthengisa kwimini yemihla. Nazi ezinye zezo qeqesho:
Isicwangciso soqulatho: Isiqulatho siyinkosi, i-SEO asethi yexabiso, ithuluzi elinamandla - yibiza yonke into oyithandayo. Kuyinto engenakuphikiswa ukuba ininzi yebhajethi ye-SEO incike ekudalweni kwendalo. Ukuphunyezwa kwesiqili sequlatho esiyimpumelelo kunye ne-SEO sinokukhuthaza ngokukhawuleza ukuguqulwa kokuphela kodwa kunye nokwethembeka kwempawu.
UkuThengiswa kweMidiya yeeNtlalo: Kunconywa kakhulu ukuba udibanise inkqubo yakho yemidiya yoluntu kunye nesicwangciso sakho se-SEO ukufezekisa iinjongo ze-SEO.Izabelo zentlalo zigqibelele ukuzisa i-backlinks yemvelo kwisistim sakho. Ingakumbi, zibonisa ukuba isicwangciso sakho somxholo sisebenza kakuhle okanye sidinga ukuhlaziywa.
Ukukhangela okuhlawulwayo: Ngokudibanisa i-Google Analytics kunye ne-SEO, unako ukujongana namagama angundoqo axabisekileyo, ngaloo ndlela ufumana i-traffic. Amaqela okukhangela ahlawulwe angabambisana namaqela e-SEO ngokuphucula izinto ezininzi, kuquka amalungiselelo egama elingundoqo, amaphepha okungena, isicwangciso soqhagamshelwano kunye nomgca uyaqhubeka.
Ubudlelwane boLuntu: Ulawulo lolwazi lwe-intanethi lelinye inyathelo ebalulekileyo kwisicwangciso sakho se-SEO. Iikomiti ze-PR zinokuzuza kakhulu ngokusebenzisana ne-SEO: ukubhekwa kwebhanki kunokubaluleka kokubili: ubukho bukhompyutheni kunye nokubonakala kokukhangela.
Ukuguqulwa: Ukudibanisa amaqhinga okuguqulwa kunye ne-SEO inokwandisa iziphumo ze-organic. Ukuba uhambelana nolwazi oluhle lomsebenzisi kunye nohambo olufanelekileyo lomxholo, uza kuzisa abasebenzisi abanelisayo kwiwebhusayithi yakho. Cinga ngokufunda imephu yokushisa ukuqonda abasebenzisi bakho bhetele. Kwakhona, vavanya i-UI yakho rhoqo.
Njengoko ubona, i-SEO ibambisana neengxaki ezininzi kwi-digital marketing.
I-SEO yinto eguqukayo: yonke imihla sibona amathuba amasha okucinga. Into engcono ongayenza ukufikelela kude kunye nokuguqulwa kwakho kuya kucaca kwaye icacise ngeqela lakho ledijithali. Bazise into oyenzayo, baxelele ngamanyathelo akho alandelayo, wabelane ngeengcinga zakho ze-SEO kunye neengcali zedijithali uze ubone oko kwenzekayo ngenyanga. Mhlawumbi, ungathanda iziphumo zokubambisana!